I-WF(J) Series Plate Friza eneYunithi yokuFakamisa, i-China WF(J) Series Plate Frizer kunye nabavelisi beYunithi yokuKhenkcisa, ababoneleli, iFactory - Square Technology Group Co., Ltd.
Izikhenkcezisi ezinjalo zingasetyenziselwa ukukhenkceza iimveliso ezahlukeneyo kwiitreyi, iipani kunye neebhokisi, ezifanelekileyo ukutya kwaselwandle, inyama encinci epakishwe kunye nokunye ukutya kwiibhloko. Amacwecwe angaphakathi abekwe ngokuthe tye ukuze iimveliso kwiitreyi okanye iipakethi zibekwe kumacwecwe okubanda okungcono. Isikhenkcezisi seplate sinokuxhotyiswa ngepiston okanye isikulufu sokucinezelwa, esibonisa ingxolo ephantsi, indawo yokuhlala encinci, ukusebenza ngokukuko kunye nokusebenza ngokulula, njl.
●Ifriji ingaba yiFreon, iAmmonia okanye i-CO2 u Yenziwe ngamanzi alwandle iAluminiyam enganyangekiyo, inqanaba lokutya. Iplate ye-aluminium engqingqwa engama-25mm inika amandla aphezulu, ukumelana nokubola okuphezulu kunye nokuqhutywa kobushushu. Le ipleyiti ngokuzenzekelayo welding kwaye ubuncinane deformation.
●Indawo ebiyelweyo igqunywe ngesiqwenga sePolyurethane isenza amagwebu ukuqinisekisa ulwakhiwo olomeleleyo kunye nokunciphisa ilahleko ebandayo ngokususa amalungu.
●I-PTFE Idityaniswe ngaphandle kwesibophelelo seHose Joint, iflanged okanye umsonto unxibelelwano. Ithumbu ligutyungelwe ngentsimbi yesinyithi engama-304L. u Ifakwe eyakhelwe-ngaphakathi eJamani IBITZER isiguquli seyunithi.
●Pre-ndawonye, ​​akukho ufakelo intsimi efunekayo, kulula ukuba ukucoca kunye nenkonzo.
I-WF-1J, izitishi ezili-11
◆Indawo esebenzayo yemveliso: 27.7m2)
◆Inombolo zeepleyiti: 12
◆Ukucoca ipleyiti: ukusuka kwi-46mm ukuya kwi-95mm
◆Umthamo wefriji: 71.1kw
◆Umthamo wokugcwalisa ifriji: R404A 80Kg
◆Ifriji yefriji: ezimbini i-6G-30.2Y(I IBITZER) U 22Kw × 2
◆indlela yonikezelo iquid: IDanfoss TX ivelufa
◆I-Condenser: I-Shell ube nomtshisi wobushushu, i-corrosion tubes enganyangekiyo
1) Impompo yeoyile yamandla emoto: 1.5kw 380V / 50Hz
2) Impompo yeoyile iseti uxinzelelo: 5MPa
3) I-pump pump flux: 10L / min
I-4) Ioyile yeHydraulic: Hayi. I-oyile ye-hydraulic ye-hydraulic 46kg (Ngokukhetha) U
◆Imilinganiselo iyonke: 4350 (l) × 1950 (w) × 2950 (h)